Inowanzobvunzwa Mibvunzo Nezve Coronavirus | RayHaber | raillynews
mushaGENERALInowanzo Bvunzwa Mibvunzo Nezve Coronavirus
1. Chii chitsva Coronavirus (2019-nCoV)?
Iyo Coronavirus itsva (2019-nCoV) hutachiona hwakaonekwa musi wa13 Ndira, 2020, semhedzisiro yekutsvaga kwakaitwa muboka revarwere vakatanga kukudza zviratidzo mugwara rekufema (fivha, kukosora, kupfupika kwemweya) muWuhan Province pakupera kwaZvita. Kupararira kwacho kwakatanga kuwanikwa mune avo vari munyanza yemugungwa nemusika wemhuka mudunhu rino. Ipapo yakapararira kubva pamunhu ichienda kune mumwe uye ikapararira ichienda kune mamwe maguta muProvince yeHubei, kunyanya Wuhan, uye mamwe maprovince ePeople's Republic of China.
2. Coronavirus yako (2019-nCoV) inotapurwa sei?
Iyo inotapukirwa nekufemerwa kwemadonhwe akapararira munzvimbo nekutsvedza kwevanorwara. Mushure mokubata nzvimbo dzakasvibiswa neasidhi yekufema yevarwere, hutachiona hunogona kutorwa nekutora maoko kumeso, maziso, mhino kana muromo pasina kushamba. Izvo zvine njodzi kubata maziso, mhino kana muromo nemaoko akasviba.
3. Utachiona hwekoronavirus hutsva hunowanikwa sei?
Mero bvunzo dzinodiwa dze 2019 nyowani coronavirus diagnosis inowanikwa munyika medu. Iyo yekuongorora test inoitwa chete muNational Virology Reference Laborator yeGeneral Directorate yeHutano hweHurumende.
4. Pane mushonga unoshanda nehutachiona unogona kushandiswa kudzivirira kana kurapa chirwere chitsva cheCoronavirus (2019-nCoV)?
Iko hakuna kurapwa kunobudirira kwechirwere. Zvichienderana nemamiriro ese eurwere, kurapwa kunodiwa kunoiswa. Iko kushanda kwemamwe madhiragi pahutachiona kuri kuongororwa. Nekudaro, ikozvino hapana hutachiona hunoshanda mushonga.
Mishonga inorwisa mabhakitiriya inogona here kudzivirira kana kurapa hutachiona hweCoronavirus (5-nCoV)?
Kwete, maantibiotic haatapukire hutachiona, anoshanda chete pakurwisa mabhakitiriya. Iyo Coronavirus itsva (2019-nCoV) hutachiona saka hutachiona haufanire kushandiswa kudzivirira kana kurapa hutachiona.
6. Inguva yakareba sei iyo yekufungidzirwa kweiyo Coronavirus (2019-nCoV) yakareba sei?
Iyo nguva yekurereka kwehutachiona huri pakati pemazuva maviri nemazuva gumi nemana.
7. Ndezvipi zviratidzo nezvirwere zvinokonzerwa neCoronavirus itsva (2019-nCoV)?
Kunyangwe zvakataurwa kuti panogona kunge paine zviitiko pasina zviratidzo, chiyero chavo hachizivikanwe. Zviratidzo zvakajairika ndeye fever, kukosora uye kupfupika kwemweya. Mune zviitiko zvakanyanya, pneumonia, kukundikana kwakanyanya kufema, kutadza kwemeno uye kufa kunogona kukura.
8. Ndiani achakanganisa Coronavirus (2019-nCoV) nyowani?
Maererano nedatha yakawanikwa, avo vakweguru uye chirwere chechirwere (senge asthma, chirwere cheshuga, chirwere chemoyo) vari panjodzi huru yekukuvadza hutachiona. Nedatha yazvino, zvinozivikanwa kuti chirwere ichi chinofambira mberi zvakanyanya mugumi neshanu muzana emakesi, uye kufa mune angangoita 10% emakesi.
9. Icho chirwere chitsva cheCoronavirus (2019-nCoV) chinokonzera kufa nekukurumidza?
Chirwere chinoratidza kosi inononoka, zvichienderana neshoko rakaburitswa pane vanorwara. Kwemazuva mashoma ekutanga, kunyunyuta kwakapfava (senge fivha, kurwadziwa kwehuro, kushaya simba) kunoonekwa uyezve zviratidzo zvakaita sekukosora uye kupfupika zvinowedzerwa. Varwere kazhinji vanorema zvakakwana kuti vanyore kuchipatara mushure memazuva manomwe. Naizvozvo, mavhidhiyo pamusoro pevarwere vari pasocial media, akangoerekana adonha orwara kana kufa, haaratidze chokwadi.
10. Munyika itsva coronavirus chirwere yakashuma Turkey (2019-NCover) Pane nyaya?
Kwete, chirwere cheNew Coronavirus (2019-nCoV) hachisati chaonekwa munyika medu nanhasi (kubva munaFebruary 7, 2020).
11. Ndeapi nyika, kunze kwePeople's Republic of China (PRC) iri mungozi yechirwere?
Chirwere ichi chiri kuchinyanyoonekwa muPeople's Republic of China. Iwo phenomena anoonekwa mune dzimwe nyika dzepasi ndeaya kubva kuPRC kuenda kune idzi nyika. Mune dzimwe nyika, vashoma kwazvo vavagari kubva kuPRC vakatapukirwa nezvizvarwa zvenyika iyoyo. Parizvino, hapana imwe nyika kunze kwePRC uko nyaya dzemumba dziri kupararira nekukurumidza. Iyo Sainzi Advisory Board yeIye Ministry of Health inoyambira chete kune PRC kuti "kusaenda kunze kwekunge zvakakodzera". Vafambi vanofanira kutevedzera nyevero dzenyika uye nedzimwe nyika.
12. Ndeapi mabasa anoitwa nebazi rezvehutano pamusoro penyaya iyi?
Iko kusimudzira kuri kuitika munyika uye kupararira kwechirwere pasi rese kunoongororwa neChipatara chedu. Iyo New Coronavirus (2019-nCoV) Science Board yakagadzirwa. Risk Ongororo uye Sayenzi Board musangano yakaitirwa kweiyo chitsva Coronavirus (2019-nCoV) chirwere. mativi ose nyaya (Turkey Border uye Coastal Directorate General Wezvoutano, Public Hospitals, General Directorate of Emergency Medical Services Directorate General kuti External Relations Directorate-General, sezvo wekuongorora) zvinosanganisira zviitiko kutevera uye musangano kana kuramba kuitwa nguva dzose.
Matimu anoshanda panheyo ye7 / 24 hwaro akaiswa muPublic Health Emergency Operation Center mukati meGeneral Directorate yeHurumende Hutano. Munyika medu, zvakakosha kuchengetedza zvakatorwa mukuwirirana nezvinokurudzirwa neWorld Health Organisation. Panzvimbo dzekupinda nyika yedu senge nhandare dzendege uye nzvimbo dzekupinda mugungwa, yambiro dzakatorwa dzekuzivikanwa kwevanofamba nevarwere vanogona kubva munzvimbo dzine njodzi uye matanho anofanira kutorwa kana paine fungidziro yekurwara yakatemerwa. Ndege dzakananga nePRC dzakamiswa kusvika 1 Kurume. Iyo inopisa kamera yekuongorora application, iyo yakatanga kushandiswa kune vafambi kubva kuPRC, yakawedzerwa kuti ibatanidze dzimwe nyika kubva musi wa05 Kukadzi 2020.
Nhungamiro yekuongorora, nzira dzakanangana nezvirwere, maitiro ekudzivirira uye ekutonga akagadzirirwa. Management algorithms ematare akacherechedzwa akagadzirwa uye mabasa uye basa revaya vanobatana zvakatsanangurwa. Ratidziro iyi inosanganisirawo zvinhu izvo vanhu vanozoenda kana vanobva kunyika dzine mhosva vanofanirwa kuita. Iri ratidziro nezviratidziro nezvegwaro iri, mhinduro kumibvunzo inowanzo bvunzwa, maposta uye mabrochure zvinowanikwa pawebsite yepamutemo yeGeneral Directorate yeHutano hweHuzhinji Pamusoro pezvo, samples dzekufemesa dzinotorwa kubva kuvanhu vanotevera tsananguro yezvezviitiko zvinogona kuitika uye vanomira vari voga mune zvehutano mamiriro kusvika pakazowanikwa sampuro.
13. Kutarisa pamwe nekamhepo yekushisa kamera chiyero chakaringana here?
Makamera ekushisa anoshandiswa kuona vanhu vane fivha uye kuitisa bvunzo zvakare dzekuti vanotakura chirwere nekuvaparadzanisa nevamwe vanhu. Ehezve, hazvigoneke kuona varwere vasina fivha kana avo vachiri muchikamu chekuvharidzira uye vasati varwara. Nekudaro, sezvo kusati kuchine imwe nzira yekukurumidza uye inoshanda kwazvo iyo inogona kushandiswa pakuongorora, nyika dzese dzinoshandisa makamera anodziya. Kunze kwemakamera anodziya, vapfuuri vanobva munzvimbo ine njodzi vanoziviswa mumitauro yakasiyana pane iyo ndege, uye mabrochure eruzivo akagadzirirwa mumitauro yekumwe anoparadzirwa kunzvimbo dzepasipoti.
14. Kune here chinyorwa chitsva cheCoronavirus (2019-nCoV)?
Aiwa, hapana mushonga wekudzivirira parizvino .. Zvinonzi gomarara rinogona kushandiswa zvakachengeteka pane vanhu kunyangwe kufambira mberi muhunyanzvi kunogona kugadzirwa kutanga-tanga.
15. Ndeapi mazano ekusabata chirwere?
Nheyo dzakakosha dzinokurudzirwa kuderedza njodzi yekupararira kwehutachiona hwekufema zvakare inoshanda kuNew Coronavirus (2019-nCoV). Ava:
-Kushambidza kwemaoko kunofanirwa kutariswa. Maoko anofanirwa kushambidzwa nesipo nemvura kweanenge masekondi makumi maviri, uye doro-rinomwa ruoko antiseptics rinofanira kushandiswa mukushaikwa kwesipo nemvura. Hapana chikonzero chekushandisa sipo ine antiseptic kana antibacterial, sipo yakajairika yakakwana.
- Muromo, mhino uye maziso haafanire kubatwa pasina kushambidza maoko.
-Vanhu vanorwara vanofanira kudzivisa kusangana (kana zvichikwanisika, ive chinhambwe 1m kure).
- Maoko anofanirwa kushambidzwa kazhinji, kunyanya mushure mekusangana zvakananga nevanhu vanorwara kana nharaunda yavo.
- Nhasi, hapana kudikanwa kwekuti vanhu vane hutano vashandise masks munyika yedu. Iye munhu ari kurwara nehutachiona chero hwekufemha chirwere anofanira kufukidza mhino nemuromo pamwe neanoraswa matapepa mapepa panguva yekutsvukisa kana kutsvedza, kana pasina mapepa matipi, shandisa zamu mukati, kana zvichikwanisika, kwete kupinda munzvimbo dzakazara vanhu, kana zvichidikanwa, kuvhara muromo nemhino, uchishandisa masaiti ekurapa kana zvichikwanisika. Zvinokurudzirwa.
16. Chii chinofanira kuitwa nevanhu vanofanirwa kuenda kune dzimwe nyika vane huwandu hwevazhinji varwere, senge People's Republic of China, kuti vadzivirire chirwere ichi?
- Kana zvichikwanisika, haifanire kushanyirwa kunzvimbo dzehutano nekuda kwekuvapo kwevarwere, uye kusangana nevamwe varwere kunofanirwa kuderedzwa pazvinenge zvakafanira kuenda kunzvimbo yehutano.
- Kana uchitsokomora kana kutsvedza, mhino nemuromo zvinofanirwa kuvharwa nepepa rekurasa, kana paine pasisina mapepa emukati, mukati merimwebvu rinofanira kushandiswa, kana zvichikwanisika, harifanirwe kupinda munzvimbo dzakazara vanhu, kana zvichidikanwa kupinda, muromo nemhuno zvinofanirwa kuvharwa, uye chigadzirwa chekurapa chinofanira kushandiswa.
-Kudya nyama yemuchero kana isina kubikwa zvigadzirwa zvinofanirwa kudzivirirwa. Zvikafu zvakabikwa-zvakanaka zvinofanirwa kuve zvinosarudzwa.
- Nzvimbo dzine njodzi huru dzezvirwere zvakawandisa, dzakadai semapurazi, misika yezvipfuyo nenzvimbo dzinogona kuurayiwa mhuka, dzinofanirwa kudzivirirwa.
-Kana paine chero zviratidzo zvekufema zvikaitika mukati memazuva gumi nemana mushure mekufamba, mask inofanira kupfekedzwa kunzvimbo iri pedyo yehutano, uye chiremba anofanira kuziviswa nezve nhoroondo yekufamba.
17. Chii chinofanira kuitwa nevanhu vanoenda kune dzimwe nyika kudzivirira chirwere ichi?
- Kana uchitsokomora kana kutsvedza, mhino nemuromo zvinofanirwa kuvharwa nepepa rekurasa tsvina, mune zviitiko zvisina pepa rematehwe, mukati meiyo nhivi inofanirwa kushandiswa, kana zvichikwanisika, haifanirwe kunge ichipinda muchaunga uye munzvimbo.
-Chikafu chakabikwa chinofanira kuve chinodikanwa pamusoro pechikafu chakabikwa.
18. Pane here njodzi yekuparadzirwa kwekoronavirus kubva pamapakeji kana zvigadzirwa kubva kuPeople's Republic of China?
Kazhinji, aya mavhairasi anogona kuramba achirarama kwenguva pfupi yenguva, saka hapana kusvibiswa nepakeji kana kutakura zvinhu kunotarisirwa.
19. Kune here njodzi yechirwere chekoronavirus chitsva munyika medu?
Hakuchina mhaka munyika medu. Kufanana nenyika dzakawanda pasi rose, pane mukana wekuti nyaya dzingaitike munyika medu.Ihutano Sangano haina zvirambidzo pane iyi nyaya.
20. Pane chero zvirambidzo zvekufamba pamusoro peChina?
Ndege dzese dzakananga kubva kuChina dzakamiswa kubva musi wa5 Kukadzi 2020 kusvika Kurume 2020. Iyo Sainzi Advisory Board yeIye Ministry of Health inoyambira chete kune PRC kuti "kusaenda kunze kwekunge zvakakodzera". Vafambi vanofanira kutevedzera nyevero dzenyika uye nedzimwe nyika.
21. Motokari dzinoshanya dzinofanira kucheneswa sei?
Zvinokurudzirwa kuti mota idzi dzive nemweya wakanaka uye yekuchenesa yakanyanya kunoitwa nemvura neshayeti. Zvinokurudzirwa kuti mota dzigezwe mushure mekushandiswa imwe neimwe, kana zvichikwanisika.
22. Ndeapi matanho ekuchenjerera anofanirwa kufungwa nezvawo uchifamba nemotokari dzekushanyira?
Inofanirwa kuve nechokwadi chekuti mota dzinogara dzichipinzwa nemhepo nyowani panguva yekushandisa. Mukupinda kwemotokari, iyo inofanirwa kuve inofarira kupisa uye kutonhodza mweya nemhepo inotorwa kubva kunze. In-mota shanduko yemhepo haifanire kushandiswa.
23. Hotera, mahotera, nezvimwe zvevaenzi vanosvika pamwe chete Kune ngozi yekurwara kwevashandi vakapihwa pavanouya kunzvimbo yavo yekugara?
Vashanyi, avo vanotakura zvinhu zvavo, zvakadai semasutukesi, havafanirwe kutapukirwa (isa njodzi yekupararira kwechirwere) kunyangwe hutachiona husingararame munzvimbo isina kuvonekwa kwenguva yakareba. Nekudaro, pane zvese, mushure mekuita kwakadaro, maoko anofanirwa kushambidzwa pakarepo kana kushambidzwa neruoko neanonwa-akaiswa ruoko antiseptic.
Uye zvakare, kana paine vashanyi vanouya kubva kumatunhu ane chirwere icho chakanyanya, kana paine fivha, kutsvanzvadzira, kukosora pakati pevaenzi, zviri nani kupfeka mask yekurapa kune uyu uye mutyairi kupfeka mask yekurapa yekuzvidzivirira. Inofanirwa kuve nechokwadi chekuti 112 inoshevedzwa uye ruzivo rwunopihwa kana iyo hutano hwekutarisirwa ichiziviswa zvisati zvaitika.
24. Ndeapi matanho anofanira kutorwa mumahotera?
Kuchenesa kwakayerwa nemvura uye mudziyo wakakodzera munzvimbo dzekugara. Kunyanya kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa kune iyo maficha ayo anowanzo kubatwa nemaoko, mawoko ekubata, mabatire, handrails, chimbuzi uye kunyura kuchenesa. Iko hakuna humbowo hwesainzi kuti kushandiswa kwehuwandu hwezvigadzirwa zvinonzi zvinonyanya kushanda kune iyi hutachiona zvinopa kumwe kudzivirirwa.
Kutarisirwa kunofanirwa kubhadharwa pakuchenesa maoko. Maoko anofanirwa kushambidzwa nesipo nemvura kweanenge masekondi makumi maviri, uye doro-rinomwa ruoko antiseptics rinofanira kushandiswa mukushaikwa kwesipo nemvura. Hapana chikonzero chekushandisa sipo ine antiseptic kana antibacterial, sipo yakajairika yakakwana.
Iye munhu ari kurwara nehutachiona chero hwekufemha chirwere anofanira kufukidza mhino nemuromo pamwe neanoraswa matapepa mapepa panguva yekutsvukisa kana kutsvedza, kana pasina mapepa matipi, shandisa zamu mukati, kana zvichikwanisika, kwete kupinda munzvimbo dzakazara vanhu, kana zvichidikanwa, kuvhara muromo nemhino, uchishandisa masaiti ekurapa kana zvichikwanisika. Zvinokurudzirwa.
Sezvo hutachiona husingagone kurarama munzvimbo isingaoneki kwenguva yakareba, hapana kusvibiswa kunotarisirwa kune vanhu vakatakura masutukesi emurwere .. Izvo zvakafanira kuisa doro ruoko antiseptics munzvimbo dzinowanikwa.
25. Ndeapi matanho anofanirwa kutorwa nevashandi vepanhandare?
Matanho ezvese anofanirwa kutorwa kudzivirira kutapukirwa.
Sezvo hutachiona hahugone kurarama munzvimbo dzisina kuvonekwa kwenguva yakareba, hapana hutachiona hunotarisirwa kuvanhu vakatakura masutu emurwere. Izvo zvakakodzera kuisa doro ruoko antiseptic munzvimbo dzinowanikwa.
26. Ndeapi mhando dzekuchenjerera dzinofanira kuitwa nevashandi vanoshanda mumaresitorendi nemashopu uko vashanyi vanobva?
Kazhinji hutachiona ekudzivirira matanho anofanirwa kutorwa.
Yakanatswa kuchenesa nemvura uye sosi yakakwana pakuchenesa kumeso. Kunyanya kutarisa kunofanira kubhadharwa pakuchenesa kwemasuo anobata, faisalts, handrails, chimbudzi uye zvinyoroira zvinyoro nemaoko. Iko hakuna humbowo hwesainzi kuti kushandiswa kwehuwandu hwezvigadzirwa zvinonzi zvinonyanya kushanda kune iyi hutachiona zvinopa kumwe kudzivirirwa.
Izvo zvakakodzera kuisa doro-based ruoko antiseptic munzvimbo dzinowanikwa.
27. Ndeapi matanho ekudzivirira utachiona?
Munguva yekutsamwa kana kutsvedza, zvinokurudzirwa kuvhara mhino nemuromo nepepa rekurasa tsvina, kana iyo tisu isingawanikwe, shandisa hwiridzo mukati, kana zvichikwanisika kuti usapinda munzvimbo dzakazara nevanhu.
28. Ndiri kutumira mwana wangu kuchikoro, iyo Coronavirus itsva (2019-nCoV) inotapukirwa?
Hutachiona hweCoronavirus hutsva (2019-nCoV) hwakatanga kuChina hauna kuwanikwa munyika medu kusvika nhasi uye matanho akakodzera atorwa kudzivirira kupinda kwechirwere ichi munyika yedu. Mwana wako anogona kusangana nemavhairasi anokonzera flu, kutonhora, uye kutonhora kuchikoro, asi asingatarisirwe kusangana nazvo nekuti Coronavirus itsva (2019-nCoV) haisi kutenderera. Muchirevo chechinyorwa ichi, ruzivo rwakakosha rwakapiwa kuzvikoro nebazi rezvehutano.
29. Zvikoro zvinofanirwa kucheneswa sei?
Yakanatswa kuchenesa nemvura uye sosi yakakwana pakuchenesa zvikoro. Kunyanya kutarisa kunofanira kubhadharwa pakuchenesa kwemasuo anobata, faisalts, handrails, chimbudzi uye zvinyoroira zvinyoro nemaoko. Iko hakuna humbowo hwesainzi kuti kushandiswa kwehuwandu hwezvigadzirwa zvinonzi zvinonyanya kushanda kune iyi hutachiona zvinopa kumwe kudzivirirwa.
30. Pakudzoka kwesemester break, ndiri kudzokera kuyunivhesiti, ndichigara munzvimbo yekugara yevadzidzi, ndinogona here kuwana chirwere cheNew Coronavirus (2019-nCoV)?
Hutachiona hweCoronavirus hutsva (2019-nCoV) hwakatanga kuChina hauna kuwanikwa munyika medu kusvika nhasi uye matanho akakodzera atorwa kudzivirira kupinda kwechirwere ichi munyika yedu.
Iyo furu inogona kusangana nemavhairasi anokonzera kutonhora uye kutonhora, asi haitarisirwe kusangana sezvo Coronavirus itsva (2019-nCoV) isiri mukutenderera. Muchirevo chechinyorwa ichi, ruzivo rwakakosha nezvechirwere rwakapihwa neDhigirii redzidzo yepamusoro, Chikwereti Dormitories Institution uye vamwe vadzidzi vakafanana kumadhiri.
31. Mhuka dzinochengetwa dzinogona kutakura uye kuendesa iyo New Coronavirus (2019-nCoV)?
Zvipfuyo, zvakaita sekitsi / imbwa, dzinotarisirwa kutapukirwa neNew Coronavirus (2019-nCoV). Nekudaro, mushure mekusangana nezvipfuyo, maoko anofanirwa kushambidzwa nesipo nemvura nemvura. Nekudaro, kuchengetedzwa kuchapihwa kune zvimwewo hutachiona zvinogona kutapurirana kubva kumhuka.
32. Kugeza mhino dzako nemvura yemunyu kunogona kudzivirira hutachiona hweNew Coronavirus (2019-nCoV)?
Kwete Kushambidza mhino nguva dzose nebrine hazvibatsiri mukuchengetedza kudzivirira kubva kuhutachiona hweNew Coronary virus (2019-nCoV) hutachiona.
Ko vhiniga inogona kushandisa kudzivirira mutsva coronavirus (33-nCoV) hutachiona?
Kwete Iko kushandiswa kwevhiniga hakubatsiri mukudzivirira hutachiona kubva kuNew Coronavirus (2019-nCoV).
MIBVUNZO INONYANYA KUBVUNZWA NEZVIMWE IRIS CERTIFICATION
Inowanzobvunzwa Mibvunzo nemhinduro Pamusoro peIstanbul Airport
Ndeipi mibvunzo yaiva mufaira yakapinda kuna Vafundisi Yıldırım nokuda kwechitima chakakwirira?
Tsanangudzo yeChechi yepamusoro
Tsanangudzo ye Rahmanlar Bridge kubva kuDSI
Btk uye Logistics Center kubva kumutevedzeri
Makambani Akasiyana Akasiyana Anoshandira Purogiramu Yezviteshi zveGirare
Kururamiswa Kwemashoko Pamharidzo yeMukuru Mukuru, Fidansoy
Related Links pamwe Rail System muTurkey
Tsanangudzo Inokosha Zvikuru ZveMabhazi Anobva kuKadir Topbaş
Sachigaro Kocaoğlu, Mibvunzo Nekutakura muAegean TV Inopindurwa
Kılıçdaroğlu'nun Kadıköy-The Eagle's Metro Inoti Nezve Mutengo ...
Yechinguva Nzira Nzira yekushandisa Nekuda Darıca Gebze Metro Kudzidza
Nhasi munhoroondo: 5 April 2006 Ankara-Istanbul High Speed ​​Train